चर्चित अभिनेत्रीले हट भिडियो सेयर गर्दै यो कस्तो छ ? भनेपछि दुनियाँ ततायो [ भिडियोसहित ] – Khabaarpati
November 21, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on चर्चित अभिनेत्रीले हट भिडियो सेयर गर्दै यो कस्तो छ ? भनेपछि दुनियाँ ततायो [ भिडियोसहित ]
काठमाडौं । चर्चित बलिउड अभिनेत्री जरीन खान आफ्नो स्टाइलका कारण चर्चामा रहने गर्छिन् । उनका फिल्महरूका साथ, जरीन खान सधैं आफ्नो स्टाइलका लागि खबरमा रहने गर्छिन् । जरीन खानको एक भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ, जसमा उनी पूर्ण समर्पणका साथ व्यायाम गरिरहेकी छिन् ।
यस भिडियोमा, जरीन खान कसरत गरिरहेको शैली वास्तवमै हेर्न लायकको छ । यस भिडियोलाई अभिनेत्रीले उनको इन्स्टाग्राम रिलबाट साझेदारी गरेको छ, जुन अहिलेसम्म लाखौंले हेरेका छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
प्रशंसकहरु जरीन खानको यो भिडियोमा टिप्पणी गरेर थाकेका छैनन् । भिडियोमा, अभिनेत्री कालो टी–शर्ट र खरानी रंगको टाईटमा देखिएकी छिन । यसमा, अभिनेत्री डम्बलसँग कसरत गरिरहेको देखिन्छ । भिडियो साझेदारी गर्दै, जरीन खानले लेख्छिन्, ‘यो कस्तो छ ?’
भिडियोमा, फ्यानहरूले पनि जरीन खानको जबरदस्त शैलीको प्रशंसा गरिरहेका छन् । हामी तपाईंलाई बताउँछौँ कि जरीन खान आफ्नो दोषहीन शैलीको बारेमा चर्चामा पहिलो पटक आएकी होईनन् । यस भन्दा पहिले पनि, अभिनेत्री कहिलेकाँही उनको नृत्य भिडियोहरू र कहिले ग्लैमरस लिमलाइटमा देखिन्छन् ।
तपाईंलाईं जानकारी गराउ कि जरीन खान फिल्म ‘वीर–२०१०० बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी हुन् । यस बाहेक, जरीन खान हरर फिल्म ‘१९२१’ मा देखिएकी थिइन् ।
तर यो फिल्म बक्स अफिसमा सफल हुन् सकेन । यति मात्र होइन २०१७ मा आएको उनको ‘अक्सर २’ ले पनि बक्स अफिसमा राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छैन । बलिउडसँगै जरीन खानले तेलगु र पञ्जाबी सिनेमामा पनि आफ्नो हात चलाउन खोजिन् । अभिनेत्री अन्तिम पटक पञ्जाबी फिल्म डाकामा गिप्पी ग्रेवालसँग देखिएकी थिइन् ।भिडियोसहित ,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
January 3, 2021 goodmam